Shiinaha Axially xakameeyaa Iyadoo Double Anchor siddo soo saarayaasha saarayaasha iyo alaab | Qabasho
Axially xakameynay Iyadoo siddooyinku isku laabmayaan
Cabir: OD φ26.9-φ273mm
Halbeegga Farsamada:GRIP-G 【DAAWO
Isku-xidhka GRIP-G waxaa loogu talagalay in lagu beddelo baahida loo qabo kala-baxa, alxanka, jeexitaanka tuubbada iyo dunta tuubbada iyadoo la siinayo xal deg deg ah oo fudud oo ku biirista biibiile-dhamaadka. GRIP-G wuxuu leeyahay laba siddo barroosinka oo la dhigo meel u dhow, laakiin ka duwan, habka daboolka.
Ku habboon cabbirka tuubooyinka laga bilaabo OD φ26.9 illaa-φ273mm.
GRIP-G Sixixi ahaaneed oo lagu xakameynayo siddo labalaab isku xidhaya waa nooca ugu caansan ee taxanaha isku xidhka GRIP. Laba siddo barroosinka waxay leeyihiin saameyn isdaba-joog ah, way fududahay dhuumaha, maadaama cadaadiska uu kordhay, sidaas oo kale saameynta qabashada. GRIP-G waxay bixisaa heerar amaan oo sareeya iyadoo lagu xiro tubooyinka si wada jir ah cadaadis. GRIP-G cadaadiska shaqada ilaa 46 bar. Heerkulka heerkulka: -30 ℃ ilaa 180 ℃, maadada SS304, SS316 iyo SS316TI. Waxay ku habboon tahay codsiyada badankood ee dhismaha maraakiibta, warshadaha dibedda, biyaha iyo daaweynta qashinka, habka dhuumaha warshadaha iyo kuwa kale.
GRIP-G Farsamooyinka farsamada
（Mm） （Gudaha.） （Mm） (baarka) (baarka) (mm) (mm) (mm) (mm) Max (mm) (Nm) M
127 5.000 126-128 16 25 151 110 54 5 10 35 40 M10 × 2
Xulashada Qalabka GRIP-G
Handarraabbadeedii AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304
Baararka AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304
Giraanta barroosinka AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301